कलियुगका कुरा: पारस भन्दैछन्-मैले गोली चलाएकै छैन
पारस भन्दैछन्-मैले गोली चलाएकै छैन
पारश शाहले वकिलहरुको गाली खाए-किन विज्ञप्ति निकालेर गोली चलाएको स्वीकार गरेको? अब घटनाले नयाँ मोड लिने भयो। पारसले प्रहरी वयानमा आफूसँग बन्दुक पनि नभएको, गोली पनि नचलाएको भन्नेछन्। विज्ञप्ति पनि आफूले जारी नगरेको भन्नेछन्। ठूलावडाले नै त हो कानुन 'नु' कहिले तर्कुले त कहिले वर्दने घुमाउन जानेका...
Gaurab Luitel, Shiva Gyawali, Ajay Pathak and2others like this.
Ujwal Ojha यो घटनाले अब राजनीतिक रूप लिइसकेको अबस्थामा सुजाता को नेपाली नागरिकताको कुरा पनि चलाउनु पर्छ किनकि कानुन सुजाता भन्दा पनि माथि छ ।
Bhuwan Raut फेरि चित्त बुझेन .......... गाडिमा जान नमानेकोले हेलिक्पटर मगाको रे ............. त्यो पनि जनता कै छोरो हामि नि ................ हामलाइ त लात्तले हान्दै भेनमा हाल्छ त पुलिस ले ......... आब त हामलाइ नि हेलिक्पटरा लानु पर्यो नि कि कसो